umdlalo we-squid - Yiluphi uchungechunge wonke umuntu akhuluma ngalo? | Bezzia
I-squid Game: Wonke umuntu Ukhuluma Ngaye!
USusana godoy | 05/10/2021 14:00 | Izindaba
Kuyiqiniso ukuthi iNetflix ingasimangaza ngochungechunge olusha noma ama-movie. Eziningi zazo sezivele zise-retina yethu zilinde ingxenye yesibili. Kepha kulokhu luhlobo lokuzama ukwazi, oluguqulwe lwaba ngumdlalo nochungechunge ngasikhathi sinye olunegama Umdlalo weSquid.
Uzwile ngaye! Ngoba kubonakala sengathi akukho okunye okushiwo. I-premiere ayishiyanga muntu engenandaba, ngoba inezinhlobo ezahlukahlukene zokuxubha ukulandela isakhiwo ngokususelwa emidlalweni yezingane, noma kwabonakala kanjalo ekuqaleni. Thola konke nokuningi!
1 Uyini umdlalo weskwidi futhi umayelana nani
2 Unjani umdlalo weskwidi
3 Kungani lolu chungechunge luphumelela kangaka?
4 Ingabe izoba nengxenye yesibili?
Uyini umdlalo weskwidi futhi umayelana nani
Ngokubanzi, ingqikithi yayo imayelana nabantu abangama-456. Vele, ngale datha sesivele sihlaselwa ukungabaza okungapheli, kepha singakuxazulula. Ngoba bonke banezinkinga zezezimali futhi ngokunengqondo bafuna ukuzikhulula kukho konke. Ngakho-ke, babizwa ukuthi babambe iqhaza emdlalweni. Kepha hhayi noma iyiphi, kepha eyodwa ezoba yinkimbinkimbi kakhulu kunendlela ebukeka ngayo. Njengoba kuzofanele badlule cishe emidlalweni engu-6, yize umncintiswano uphezulu futhi ukubhekana negazi kungaba yinto yosuku. Vele, lowo okwazi ukuwina, lapho-ke uzothola umklomelo wezigidi. Khonamanjalo une-asidi eningi namahlaya amnyama.
Unjani umdlalo weskwidi
Manje njengoba sesinombono owengeziwe wokuthi iyini ngempela, akulimazi ukuthi siyazi ukuthi singadlala kanjani. Eminye yemidlalo yobuntwana yaseKorea iyabonakala. Isibonelo, kukhona eyodwa lapho kufanele basike umumo othize ngaphakathi kukaswidi. Vele, yize kubonakala kulula kungenzeka kungabi lula kakhulu ngoba uma uswidi wephuka, uzolahlekelwa. Ohlangothini kukhona umdlalo odumile we 'The red light or green light'. Njengoba sazi kahle, umuntu ofulathele uyala wonke umuntu ukuthi anyakaze noma agijime kodwa ngenkathi ilambu eliluhlaza livuliwe. Ngoba uma kubomvu kubomvu kufanele bahlale benganyakazi, uma kungenjalo, bazolahlekelwa. Kepha abalahlekelwa bese beya ekhoneni, bazobulawa.
Kungani lolu chungechunge luphumelela kangaka?
Izinsuku ezimbalwa asikayeki ukuzwa ngomdlalo weskwidi. Yini ngomlomo esiyaziyo ukuthi ukukhiqizwa okuningi sekuvele kuyaphuma. Kepha kulokhu, kuyinketho esusa olunye uchungechunge lwesikhulumi. Into ebibukeka ingacabangi kodwa kungenjalo. Ukuqala komqondo kungenye yezimpahla ezinhle kepha kusekhona okunye. Izinkinga zochungechunge, indlela okumele ababambiqhaza bayikhethe, futhi kwenza umbukeli abukeke ehlanganiswe ngokuphelele ekukhiqizeni. Kukho konke lokhu, kuyalutha impela, ngakho-ke ngeke ukwazi ukuyeka ukuyibuka. Mhlawumbe ngakho konke lokhu sekuvele kuyizici ezanele ukuqala ukukujabulela. Ngoba kubukeka sengathi ingenye yezingqikithi eziphindaphindwayo nomaphi lapho siya khona.
Ingabe izoba nengxenye yesibili?
Lapho uchungechunge olumangalisa kangaka luvela ezimpilweni zethu, kuyacaca ukuthi sisheshe sizibuze ukuthi zizoba khona izingxenye zesibili. Kulokhu akusikho ukuthi kukhona ukuqinisekiswa kokhonkolo kepha mhlawumbe bashiya iminyango ivulekile impela. Lokhu kusenza sicele izindaba esikhathini esizayo esingekude kakhulu, njengoba besingathanda. Ngokuqinisekile uyamkhumbula impumelelo enkulu yeThe Bridgertons, ezikhishwe ngoKhisimusi owedlule, awu, umdlalo weskwidi usuzobahlalisa. Okuthile okubonakala cishe kungenakwenzeka, sekuvele kufikile. Okubonakala kuyinselelo kumuntu ongenalutho oluzolahleka, bebengakwenza. Ngoba kwesinye isikhathi sigxila kuphela esicini sezezimali futhi cha, kuhlale kunokunye okulahlekile, njengokuphila uqobo. Usuvele ulubonile lolu chungechunge?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » I-squid Game: Wonke umuntu Ukhuluma Ngaye!
Ama-Lunge: Izinzuzo nezinhlobo okufanele uzazi
Thola izitsha zebhikawozi ezivela eZara Home